Fiakaran’ny maripana: ho ringana ny 25%-n’ny varika | NewsMada
Fiakaran’ny maripana: ho ringana ny 25%-n’ny varika
Nivoaka tamin’ity volana aogositra ity ny tatitra faha-28 nataon’ny sampandraharaha American Meteorological Society. Fantatra fa nafana indrindra tao anatin’ny taona telo nisesy ny taona 2017 taorian’ny 2016. Vokany, miharatsy hatrany ny zavatra hitan’ny mpikaroka. Nitombo 7, 7 sm ny salanisan’ny haavon’ny ranomasina raha oharina ny taona 1993. Nitombo ny akorandriaka miha manopy fotsy, midika ho fahafatesany.
Eto Madagasikara, ho ringana ny 25%-n’ny karazana varika raha vao mitombo 2°C ny maripana. Mihena izaitsizy ny firotsahan’ny orana, indrindra any amin’ny tapany andrefan’ny Nosy. Miova koa ny fitsokan’ny rivotra ary misy ny fotoana tena mafana miteraka haintany.
Miantraika any amin’ny fambolena sy ny jono ireo, mihena ny loharano ary hiparitaka ny valanaretina. Manafaingana ny fahapotehan’ny tontolo iainana koa ny fampiasan’ny mponina fitaovam-panjonoana mamono faobe ny hazandrano, ny fanjonoana tafahoatra, ny fandripahana ny ala, sns.
Maro ny fikambanana manohana
Manohana ny mponina ahafahany miatrika ny fiovaovan’ny toetr’andro ny fikambanana eto an-toerana sy iraisam-pirenena, toy ny WCS, ny WWF, ny Conservation international, ny ONG Fanamby, sns. Tetikasa mifototra amin’ny fitantanana sy hihazonana ny firafitry ny tontolo mananaina. Ao anatin’izany ny fanamorana ny atiala ho afaka mitroka ny voka-dratsin’ny fiovaovan’ny toetr’andro sy ireo loza voajanahary samihafa. Manampy ny foto-piveloman’ny mponina sy ny hoavy rahateo izany.